Conte ‘Waa in uu lix bilood oo xabsi ah liqaa’ – Gool FM
Conte ‘Waa in uu lix bilood oo xabsi ah liqaa’
(Turin) 05 Abriil 2016. Dacwad oogaha gacanta ku haya kiiska Antonio Conte ee la xiriira in uu musuqay natiijooyin kulan ayaa ku baaqay in tababaraha magacaaban ee Chelsea la xabsiga la dhigo mudo lix bilood ah.
Tababaraha Italy waxaa ku socota dacwo musuq ciyaareed ah iyo edeemo ah in uu ku guul dareystay soo sheekidda kulan natiijadiisa la sii iclaamiyey oo u dhexeeyey Albinoleffe iyo Siena 2011 waqtigaas oo uu kooxda dambe leylinayey, walow go’aan ka qaadashada xukunkiisa aan la fileyn ilaa iyo dhamaadka May.
Hogaamiyaha Italy kaas oo shalay la xaqiijiyey in uu noqon doono hogaamiyaha Chelsea ololaha dambe kaddib Euro 2016 – ayaa ogolaaday in uu maro nidaam, taas oo dedejin doonta geedi socodka sharciga, hadii lagu helo dambiga, waxaa xukunkiisa laga jari doona saddex milood hal meel.
Marka laga yimaado lixda bilood ee xukunka ah, dacwad oogaha waxa uu soo bandhigay in 46 jirka lagu ganaaxo bixinta lacag dhan €8,000 inkastoo qareenaddiisa ay ku kalsoon yihiin cadeenta dambi la aantiisa.
Isaga oo la hadlaya wakaalada wararka ee Reuters, qareebka Conte, Leonardo Cammarta waxa uu yiri: “Antonio Conte wuu beeniyey in uu sameeyey wax qalad ah iyo ogaanshaha kulan la musuqay.”
Conte waxaa hore loogu riday 10 biloodd oo ganaax ah waqtigiisii Juventus, inkastoo ugu dambeyntii lagu soo koobay afar bilood.
“Cristiano Ronaldo wuxuu ugu fiican yahay dadka ku nool adduunkan, laakiin Messi..”.